'Sekuphele iminyaka ebefundisi befihla amanyala omholi onukubeza izingane' | News24
'Sekuphele iminyaka ebefundisi befihla amanyala omholi onukubeza izingane'
Pretoria – Sekuphele iminyaka abefundisi bebandla iHatfield Christian Church befihla ihlazo lokunukubezwa ngokocansi kwamantombazane asemancane ebandleni, enukubezwa wumholi wentsha.
Ngengoba iNkantolo yoMthethosisekelo idingida imigomo nemibandela yamacala okunukubeza ngokocansi, kuvela indaba kaGeorge Donald, 67, owagwetshwa yiNkantolo yaseFunda yasePitoli.
UDonald wagwetshwa iminyaka engu-11 nokungukuthi kumele nakanjani engu-6 ayihlale ejele.
Lo mlisa walahlwa yicala lokudlwengula indodakazi yakhe uMarijke Donald oseganele kaMwathi iminyaka eminingi ngeminyaka yawo-1980 futhi wadlwengula nendodakazi yakhe ayi-adoptha izinyanga ezimbalwa ngesikhathi ihlala kwakhe.
Indodakazi yakhe uMarijke waqala eneminyaka emithathu waze wahlanganisa iminyaka engu-12 ubudala eyidlwengula kanti le enye indodakazi wayiqala ineminyaka engu-10 ubudala yaze yabikela umama kaMarijke.
OLUNYE UDABA: Ibandla lithi akubona abasephutheni, amaphoyisa kamasipala abasukelile
Umama uyena owabikela ibandla ngalokhu okwakwenziwa yindoda yakhe efuna ukuba limcebise ngale nkinga. Ibandla labanika usizo lokubeluleka ngokwengqondo futhi bayalelwa ukuba baqinise emkhulekweni.
Ngesikhathi exhumana nobuholi bebandla iHatfield Christian Church ngonyaka odlule, uMarijke usole ubuholi bebandla ngokuziba izigameko zokuhlukunyezwa kwezingane nokuvikela isigilamkhuba.
Uthi bamtshela ukuthi imigomo yebandla ayibavumeli ukuba baye emaphoyiseni noma bathathe "umfowabo eNkosini" beyomqulisa phambi kwamajaji.
UMarijke uthi wayengahlukumezekile ngokocansi kuphela kodwa nasemoyeni wakhe ngokunjalo.
"Ukukhula ngaphansi kwalesi simo kungenze ngaba yingane ephila ngokwesaba, nangokudideka futhi ngingakwazi ukuhlukanisa phakathi kokufanele nokungalungile. Ukube ibandla lakwazi ukungivikela laya emaphoyiseni nalolu daba ngabe kwaba ngcono," esho.